6 Febraayo- Maalinta caalamiga ee u dulqaadasho la’aanta gudniinka fircooniga | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / 6 Febraayo- Maalinta caalamiga ee u dulqaadasho la’aanta gudniinka fircooniga
6 Febraayo- Maalinta caalamiga ee u dulqaadasho la’aanta gudniinka fircooniga
Himilo FM –Gudniinka fircooniga waa dhaawaca loo geysto xubinta taranka haweenka sababo aan la xiriirin caafimad, waxaana loo arkaa xadgudub ka dhan ah xuquuqda gabdhaha iyo haweenka.
Caadadan waxay ka tarjumeysaa sida loogu xadgudbo xuquuqda haweenka sida tan caafimaadka iyo midda jirreed iyadoo lagula kacayo tacadi aanan laheyn wax qiil ah.
Inkastoo gudniinka fircooniga laga sameeyo 30 dal oo ku yaala Afrika iyo bariga dhexe haddana caadadan waa dhibaato caalami ah, waxaana laga soo diiwaan geliyay dalal kale oo dhaca Asia iyo Latin Ameerika. Waxa kale oo la soo wariyay in caadadan laga helo dadka qaxootiga ah ee ku nool Yurub, Waqooyiga Ameerika, Australia iyo New Zealand.
Bishii July ee sannadkii hore, xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray warbixin xoojinaysa dadaalada caalamiga ah ee lagu cirib-tirayo gudniinka fircooniga ah.
Waxay xustay warbixinta in dadaalada loo baahan yahay in bartilmaameed looga dhigo haweenka khatarta ugu jira nuucyada faquuqa sida kuwa qaxootiga ah iyo haweenka ku nool miyiga.
Si loo dhiiro geliyo cirib-tirka gudniinka fircooniga, waxay tahay in la helo dadaalo iyo hannaan abaabulan kaasi oo la tacaamula bulshooyinka islamarkana xoogga saara xuquuqda aadanaha.
Ka go’naansho siyaasadeed oo ka yimaada dowladaha iyo kuwa dejiya siyaasadaha ayaa muhiim ah si dadaalada loogu tarjumo xaqiiqooyin iyo tallaabooyin horseeda in gudniinka fircooniga noqdo mid aan loo heyn wax dulqaad ah.
Hay’adaha Qaramada midoobay ee UNFPA iyo UNICEF ayaa hoggaaminaya barnaamij lagu dardar gelinayo cirib-tirka gudniinka fircooniga ah. Waxa uu barnaamijkan xoogga saarayaa 17 dal oo ku yaala Afrika iyo bariga dhexe isaga oo taageera dadaalada heer caalami iyo gobal.
Maanta oo kale, waxaa looga dan leeyahay in lagu iftiimiyo khatarta gudniinka fircooniga, sida uu u yahay xadgudub aan loo dulqaadan karin iyo in la muujiyo dadaalada socda ee looga hortagayo dhammaan rabshadaha ka dhanka ah haweenka.
Waxay dunida qirsan tahay in isbadal laga sameeyay kahortaga caadadan ku baahsan dalal badan hase ahaatee waxaa tiro yar ah dalalka si rasmi ah u mamnuucay ee sharciyo ka dejiyay la dagaalanka gudniinkan.
Previous: Maqal:- Barnaamijka Aqool-kaal
Next: Masar: Hooyo wiilkeeda ku heysay qol mugdi ah muddo 10 sanno!